नेपालमा वार्षिक साढे ५ अर्बको गोलभेंडा उत्पादन | गृहपृष्ठ
Home समाचार नेपालमा वार्षिक साढे ५ अर्बको गोलभेंडा उत्पादन
नेपालमा वार्षिक साढे ५ अर्बको गोलभेंडा उत्पादन
फागुन २४, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष२०६५/६६ मा नेपालमा करीब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गोलभेंडा उत्पादन भएको छ । उक्त आवमा नेपालमा कुल १९ हजार ७ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गोलभेंडाखेती गरिएको थियो । यसबाट ३ लाख १७ हजार ६ सय ६५ मेट्रिकटन गोलभेंडा उत्पादन भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका तथ्याङ्क अधिकृत रामहरि गैरेले बताए । नेपालमा ११ लाख ४२ हजार ४२ घरपरिवार गोलभेंडाखेतीमा आबद्ध छन् । उनका अनुसार उत्पादित गोलभेंडामध्ये २ लाख ८३ हजार ९ सय ९९ मेटन मात्र बजारमा विक्री भएको थियो । नेपालमा गोलभेंडाको किसान मूल्य औसत प्रतिकिलो करीब रू. १९ पर्ने गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार गोलभेंडा उत्पादनका हिसाबले नेपालको दोस्रो प्रमुख तरकारी बाली हो । यसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करीब १६ हजार १ सय ५ किलो रहेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बढी गोलभेंडा उत्पादन पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ । यस क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख २४ हजार ३ सय ८५ मेटन गोलभेंडा उत्पादन हुँदै आएको छ । र, करीब ५ लाख २४ हजार ३ सय ११ घरपरिवारले १५ हजार ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गोलभेंडाखेती गर्दै आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको गोलभेंडामध्ये २ लाख १० हजार २ सय ८६ मेटन विक्री हुने गरेको छ । बाँकी १४ हजार ९९ मेटन गोलभेंडा कृषक आफैले उपभोग गर्ने गरेका छन् । सो क्षेत्रमा गोलभेंडाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४ हजार ८ सय ७६ किलो छ । विभागका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा गोलभेंडाको किसान मूल्य औसत प्रतिकिलो साढे २१ रुपैयाँ पर्छ । तराई क्षेत्रमा वार्षिक ९० हजार ४ सय ६० मेटन गोलभेंडा उत्पादन हुँदै आएको छ । तराई क्षेत्रका करीब ५ लाख ३६ हजार ३ सय २८ घरपरिवारले ४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गोलभेंडाखेती गर्दै आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उत्पादित गोलभेंडामध्ये करीब ७२ हजार ५ सय ९ मेटन मात्र विक्री हुने गरेको छ । करीब १७ हजार ९ सय ५२ मेटन गोलभेंडा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । तराईमा गोलभेंडाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करीब २० हजार ७ सय ७६ किलो छ । सो क्षेत्रमा गोलभेंडाको औसत किसान मूल्य प्रतिकिलो साढे १५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम २ हजार ८ सय १२ मेटन गोलभेंडा वर्षकोनी उत्पादन हुने गरेको छ । सो क्षेत्रमा करीब २ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा गोलभेंडाखेती गर्ने गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका ८१ हजार ४ सय ३ घरपरिवार यस खेतीमा आबद्ध छन् । सो क्षेत्रमा उत्पादन भएको गोलभेंडामध्ये १ हजार २ सय ५ मेटन मात्र बजारमा विक्री हुने र बाँकी १ हजार ६ सय ७ मेटन कृषक आफैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा गोलभेंडाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करीब १० हजार किलो रहेको छ । सो क्षेत्रमा गोलभेंडाको औसत मूल्य प्रतिकिलो रू. २८ पर्ने गरेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।
अर्ग्यानिक चियाको उत्पादन बढ्दो
फागुन २४, नुवाकोट (अस) । नुवाकोट बुङताङका जगतबहादुर तामाङलाई १० वर्षअघिसम्म आफ्नो जग्गामा पनि चियाखेती हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । तर, अहिले उनी एकातिर यही खेतीबाट गतिलो आम्दानी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई गाउँमा चियाखेती गर्न प्रेरित गर्दै छन् । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा १३ वर्ष प्रधानपञ्च भएका तामाङ २०५४ सालमा सुस्त मनस्थिति कल्याण संस्थाको सदस्य भएपछि केन्द्रीय सभामा सहभागी हुन धरान पुगेका बेला घुम्न दार्जीलिङ गएका थिए । त्यहाँको २ चियाखेतीबाट प्रभावित भएपछि उनले आफ्नो जग्गामा चियाखेती शुरू गरेका हुन् । उनले भने, ‘त्यहाँको चियाखेतीबाट प्रभावित भएर मैले २०५७ देखि नुवाकोटमा चियाखेती थालेको हुँ । निरन्तरको प्रयासले अहिले मलाई जिल्लाकै उदाहरणीय चिया कृषक बनाएको छ ।’ उनी अहिले प्राङ्गारिक चियाखेतीको प्रवर्द्धन र युवाशक्तिलाई यस खेतीतर्फ आकर्षित गर्न मरिमेटेर लागेका छन् ।
७० वर्षीय चिया कृषक तामाङले जिल्लामा शुरू गरेको चियाखेती अहिले जिल्लाका एक दर्जन गाविसका ५० परिवारको आम्दानीको गतिलो स्रोत बनेको छ । अहिले जिल्लाका बुङताङ, सामरी, देउराली, साल्मे, भाल्चे, बसुञ्चेत, सिक्रे, ककनी, छापलगायतका गाविसमा चियाखेती विस्तार भइसकेको छ । ती गाविसका करीब ३ सय हेक्टर जमीनमा गरिएको चियाखेतीबाट किसानले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटले बताएको छ । सो कार्यालयले जिल्लामा चियाखेतीको व्यावसायिक विकासका लागि उल्लेख्य सहयोग गर्न नसके पनि पकेटक्षेत्र घोषणा गरेर प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख राजाराम अधिकारीले अभियानसँग भने, ‘नुवाकोटमा चियाखेतीको प्रशस्त सम्भावना भए पनि आवश्यक सहयोग गर्न सकेका छैनौं । यस वर्ष विशेष कार्यक्रमका लागि माग पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
किसानहरूले घरेलु प्रविधिबाट चिया प्रशोधन गर्ने गरेकाले नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न विभिन्न पक्षसँग माग गरिएको नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शरणउत्सुक सापकोटाले बताए । उनका अनुसार चिया किसानलाई व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा सघाउन सङ्घले पहल शुरू गरिसकेको छ । अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गर्ने गरेकाले बजार व्यवस्थापनमा समस्या नभएको किसान जगतबहादुरले बताए । किसानलाई ऋण सहयोग उपलब्ध गराएर सरकारले व्यवसाय विस्तार र बजार प्रवर्द्धनमा सघाउनुपर्ने किसानहरूले माग गरेका छन् । व्यावसायिक तालीमको आयोजना गर्नसमेत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग उनीहरूको माग छ ।
भैंसी पाल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालनको योगदान करीब ३८ प्रतिशत छ । पशुपालनमा पनि गाई, भैंसी र बाख्रापालन आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । दूध र मासु उत्पादनमा भने भैंसीपालन व्यवसायले अग्रस्थान ओगटेको छ । हाल नेपालमा भैंसीको सङ्ख्या ३७ लाख ८ सय ६४ रहेको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये दूधालु भैंसीको ९ लाख ५६ हजार ५ सय ३० छ । हाल नेपालमा ६ लाख ३ हजार २ सय २४ मेट्रिकटन भैंसीको दूध उत्पादन हुन्छ । देशको कुल दूध उत्पादनको ७० प्रतिशत भैंसीबाट र ३० प्रतिशत गाईबाट आपूर्ति हुने गर्दछ । दुधालु गाई भैंसीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरी दूध उत्पादन बढाउने कार्यक्रम विगत ३ दशकदेखि नै शुरू भएको हो । तर पनि, यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नवजात पाडापाडीको हेरविचार
पाडापाडी जन्मेर सफा भइसकेपछि स्टेरिलाइज्ड ब्लेड वा कैंचीले नाभी काटी दिनुपर्दछ । नाभी काट्दा २ इञ्च शरीरतिरको भाग छाडी सफा धागोले बाँधेर काट्नुपर्छ । त्यस पछि टिञ्चर आयोडिनको झोल लगाई खुला राख्नुपर्छ । पाडापाडीलाई दूध खुवाउनुअघि कल्चौंडो साबुन पानीले राम्ररी सफा गर्नुपछ । र, प्रत्येक थुनबाट २/३ सिर्का दूध निचोरेर फाली बिगौती दूध प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुपर्छ । पाडापाडीलाई प्रशस्त मात्रामा बिगौती दूध खुवाउँदा रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुन गई बच्चा स्वस्थ रहन्छ । यदि माउ कुनै रोगले ग्रसित छ भने दूध उमालेर मात्र खुवाउनुपर्छ ।
बिगौती दूध खुवाउँदा हुने फाइदा
(क) गामा ग्लोबुलिन प्रोटिन बढी मात्रामा पाइने हुनाले रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्दछ ।
(ख) सामान्य दूधभन्दा ४/५ प्रतिशत बढी प्रोटिन र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी भिटामिन ‘ए’ को साथै शरीरलाई चाहिने आवश्यक फलाम, म्यग्नेसियम तथा कपरजस्ता तत्त्व पाइन्छ ।
(ग) दूध खुवाउँदा पाडापाडीको शारीरिक तौलअनुरूप १० प्रतिशतका दरले दूध खुवाउनुपर्छ । विगौती दूध ६/७ दिनसम्म खुवाउनुपर्छ र विस्तारै दाना र घाँस बढाउदै लैजानुपर्छ ।
भर्खर जन्मिएका पाडापाडीलाई ८ देखि १० हप्तासम्म नरम खालको दाना खुवाउनुपर्छ । यसरी दाना बनाउँदा प्रोटिन, भिटामिन र खनिजयुक्त बनाउनुपर्छ । बच्चाले दाना नखाएमा दूध नै खुवाउनुपर्छ । दुई महीना पूरा भएपछि पाडापाडीलाई अनाजको पीठो र हरियो घाँस खुवाउनुपर्छ । पाडापाडी ३ महीना पुगेपछि राम्रो गुणस्तरको ‘हे’ तथा ‘साइलेज’ खुवाउन सकिन्छ । क्याल्सियम र फस्फोरसको महत्त्वपूर्ण स्रोत दूध नै हो ।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्षहरू
जन्मेको १२ देखि १५ दिनभित्र पाडापाडीलाई जुकाको औषधि खुवाउनुपर्छ । साथै प्रत्येक ३/३ महीनामा जुकाको औषधि र ६ महीनापछि नाम्लेविरुद्ध औषधि खुवाउनुपर्छ ।
गोठ बनाउँदा गर्मी स्थानमा भए पङ्खा जडान गर्न सकिने हुनुपर्छ । ब्याउने र दुहुने भैंसीको गोठ छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्दछ । गोठ सफा, हावादार र खुला हुनुपर्दछ । काठको फलेक, सिमेण्ट वा अन्य जुनसुकै कच्चा पदार्थबाट गोठ निर्माण भए पनि ओरालो किसिमको हुनुपर्दछ । हिउँदमा सूर्यको प्रकाश पर्ने गरी पूर्व-दक्षिण मोहडाको हुनुपर्दछ । घाँस र दाना दिने डुँड जमीनभन्दा १ फिट माथि हुनुपर्दछ । एउटा वयस्क भैंसीलाई ७ वर्ग मिटर ठाउँ चाहिन्छ ।
दाना र घाँस
भैंसीलाई जीवन निर्वाहका लागि जीवित तौलको २ दशमलव ५ प्रतिशत सुख्खा पदार्थको आवश्यकता पर्दछ । जस्तै ४ सय केजी जीवित तौलका लागि १० किलो ग्राम पराल चाहिन्छ । दूध दिने भैंसीको लागि प्रत्येक ३ लिटर दूधको लागि १ किलोग्राम दानाको आवश्यकता पर्दछ । वैज्ञानिक कथनअनुसार ६ लिटरसम्म दूध उत्पादन गर्ने भैंसीलाई प्रशस्त मात्रामा हरियो घाँस खुवाएमा दाना दिनुपर्दैन ।
नेपालमा पाईने भैंसीको जातहरु तथा उत्पादन स्थिति
जात दूध उत्पादन लिटर दूध दिने अवधि दूधमा हुने
(प्रतिदिन) फयाट (५)
मुर्रा ५ देखि ७ ८ देखि १० महीना ७
सुर्ति ५ देखि ८ ९ देखि १० महीना ७.५
निलीरवि ६ देखि ८ २५० दिन ७
जाफरावादी १५ देखि १८ ३०५ दिन ७.५
अर्ना जङ्गली भैंसी
लिमे ३०० देखि ४०० (प्रतिबेत) २५० दिन ७